သူတို့အတွက်ကတော့ ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်က ချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်တင်မကဘဲ မြင့်မားတဲ့ဥာဏ်ရည်ပါ ပူးတွဲပါလာခဲ့တာမို့ အားကျစရာပါ ။
အနုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာ ပရိတ်သတ်အမြောက်အများနဲ့ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြသလို ပညာရေးမှာလည်း ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ရှိကြပါတယ် ။
ဘယ်သူက ဘယ်လို ထူးချွန်လဲ ဆိုတာ ကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် ...
ရွှေမင်းသားလေးရဲ့ ချစ်ပုံပြင်ထဲက ဒုတိယမင်းသားလေးကို မှတ်မိကြသေးရဲ့လား ?
သူလေးက သရုပ်ဆောင်တာ ကောင်းရုံတင်မကဘဲ ဥာဏ်လဲအင်မတန်ကောင်းပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အမှတ်ဟာဆိုရင် ပေးမှတ် ၄၀၀ မှာ ၃၈၀ - ၃၉၀ ကြားထိ ရအောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တာမို့ ကိုရီးယားတစ်ပြည်လုံးမှာ ၀.၀၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတဲ့ ထိပ်တန်းကျောင်းသားတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီး ဆိုးလ်တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ် ။
မင်းသမီးချောလေး Han Ga In ကတော့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ပေးမှတ် ၄၀၀ မှာ ၃၈၄ မှတ်ရရှိအောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဆေးကျောင်းသွားဖို့ ရည်မှန်းခဲ့ပေမယ့်
မတတ်ဖြစ်ခဲ့ဘဲ Kyung Hee တက္ကသိုလ်က hotel management မှာ tourism management မေဂျာကိုသာသင်ယူခဲ့ပါတယ် ။
ပရိတ်သတ်အချစ်တော်လေးလာပါပြီ ။ သူကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ မင်းသမီးလေး အွန်စောရဲ့ ခင်ပွန်း Song Joong Ki ပါ ။
သူကလဲခေသူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ကလေးဆန်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ရဲ့ နောက်မှာ ထက်မြက်တဲ့ဥာဏ်ရည်ပါ ပူးတွဲပါလာသူပါပဲ ။
ငယ်စဉ်တုန်းက သူ့ရဲ့ Report Card တွေဟာဆိုရင် အမြဲတန်း A တွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်ပြီး အားကစားလည်းထူးချွန်သူတစ်ယောက်ပါတဲ့ ။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုလဲ ပေးမှတ် ၄၀၀ မှာ ၃၈၀ - ၃၉၀မှတ် ကြားထိ ရအောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တာမို့ သူလည်းပဲ ကိုရီးယားရဲ့ ထိပ်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ Sungkyunkwa တက္ကသိုလ် ကို ၀င်ခွင့်ရခဲ့ပြီး business management နဲ့ဘွဲ့ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
မင်းသား Lee Sang Yoon ကတော့ အမှတ် ၄၀၀ မှာ ၃၇၀ ရအောင်ဖြေခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ဆိုးလ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပြီး psychology ကိုဆက်လက်ဆည်းပူးခဲ့တာပါ ။ 2012 ခုနှစ်မှာတော့ မင်းသားဟာ KBS 2TV ရဲ့ Happy Together ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးမှာ သူ့ရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်မြင်တဲ့ အမှတ်ကိုပြောပြခဲ့ပြီး ၁၂ နှစ်တိုင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ ခုချိန်ထိ ဘွဲ့မရရှိသေးတဲ့ အကြောင်းကိုပါ တစ်ပါတည်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် ။
မင်းသား Rain ရဲ့ ဇနီးချော မင်းသမီးလေး Kim Tae Hee ကလည်း ကိုရီးယားရဲ့ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသူတွေထဲပါဝင်ပါတယ် ။
ကိုရီးယားရဲ့ ထိပ်တန်း ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိတဲ့ အမှတ်ကို ရရှိခဲ့သူပါ ။ သူမလဲ နာမည်ကျော် ဆိုးလ်တက္ကသိုလ်ကို တတ်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
သူမရဲ့ အလှကြောင့်ကျောင်းမှာလဲ Popular ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။
JYP မှာ သင်တန်းသားအဖြစ် Training တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Rain ကို JYP entertainment ပိုင်ရှင် Park Jin Young က ပညာကိုပြီးအောင်မသင်ရင် အဆိုတော်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးလို့ ဆိုခဲ့တာကြောင့် Rain တစ်ယောက် စာကိုအလွန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး Kyung Hee University ကို တတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ post-modern music မေဂျာကိုပဲယူခဲ့တာပါတဲ့ ။ Rain တစ်ယောက် ဂီတကိုရူးသွပ်ပုံများ ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရတဲ့သူကလည်း ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး ။
ဒီနုနုငယ်ငယ်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ပေးမှတ် ၅၀၀ မှာ ၄၅၀ ထိရအောင်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့သူဆိုရင် အံ့သြသွားကြမလား ?
တကယ်ပဲဖြေနိုင်ခဲ့သူပါ ။ Mechanical engineering ပညာရပ်ကို Busan University မှာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီမေဂျာက Busan University ရဲ့ ပင်မဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမှတ်မြင့်မားတဲ့သူတွေကိုသာ တတ်ရောက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် ။
Super Junior အဖွဲ့က Kyuhyun
သူကတော့ သချာင်္ပါရမီရှင်လို့ကို ခေါ်ခံရတဲ့သူပါ ။ သချာင်္ပြိုင်ပွဲတွေဆို သူ့စွမ်းရည်ကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ မနေနိုင်အောင်ပါပဲ ။ ကျောင်းမှာထဲက အဆင့်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ပြီး Olympiad သချာင်္ပြိုင်ပွဲမှာတောင် ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဆုကို ရရှိခဲ့သူပါ ။ ကောလိပ်စာမေးပွဲဖြေခါနီးမှာတော့ နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး နားကောင်းကောင်းမကြားရတာကြောင့် Listening အပိုင်းကိုဖြေတဲ့နေရာမှာ အခက်တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါတောင်မှ အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး Kyung Hee University ၀င်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ် ။ TOEIC စာမေးပွဲကို အမှတ် 820 ရအောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ် ။
အရမ်းကြိုးစားတဲ့သူလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ HA:TFELT (Yeeun) ကတော့ ကျောင်းထဲက အဲဒီလိုနာမည်ကြီးတာပါ ။ ကျောင်းသားအယောက် ၆၀၀ ထဲမှာ သူမက Top ten list ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ် ။ Kyung Hee University ကို တက်ခွင့်ရအောင် မြင့်မားတဲ့အမှတ်နဲ့ စာမေးပွဲကိုအောင်လာခဲ့ပြီး post-modern music ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။